မေထုန်ဖွားတွေကို ဉာဏ်အကောင်းဆုံးနဲ့ လှပသော ရာသီခွင်ဖြစ်စေတဲ့ စရိုက်(၅)ခု - Lifestyle Myanmar
နက္ခတ်ဗေဒင်မှာ သူတို့ဝင်တဲ့ ဘယ်အခန်းကိုမဆို ထွန်းလင်းစေတဲ့ ရာသီခွင်လက္ခဏာအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ ရာသီခွင်တစ်ခုစီမှာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွေရှိကြပြီး မေထုန်ဖွားတွေရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကလည်း ထူးခြားတဲ့အထဲမှာ ပါပါတယ်။ လေးနက်တဲ့ ဉာဏစကားပြောဆိုမှုတွေရှိလိုပါသလား? မေထုန်ဖွားတွေနဲ့ စကားပြောပါ။ မေထုန်ဖွားတွေက ဉာဏ်လည်းကောင်းသလို စကားပြောလည်း ကြွယ်တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
မေထုန်ဖွားတွေနဲ့ဆိုရင် မျက်လုံးချင်းဆုံတာထက် ပိုရှိမှာသေချာပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လှပမှုနဲ့ ဉာဏ်ကောင်းမှုက သင့်အား ပိုးဖလံမျိုး မီးကိုတိုးဆိုသလို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။
မေထုန်တွေရဲ့ဘယ်စရိုက်တွေက သူတို့ကို လှပပြီး စမတ်ကျစေတာလဲ?
သင် (သို့) သင်သိသော တစ်စုံတစ်ယောက်က မေထုန်ဖွားဖြစ်မယ်ဆိုရင် သင်လိုချင်တဲ့ စိတ်ချဖို့ အာမခံချက်အားလုံးကို တွေ့လိမ့်မှာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့စစ်မှန်သော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကြောင်းကို လေ့လာရကြိုးနပ်ပါလိမ့်မယ်။
၁။ မေထုန်ဖွားတွေက စကားပြောတဲ့နေရာမှာ ကျွမ်းကျင်ပါတယ်
သင်ဟာ သင့်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ ဘယ်ခံစားချက် (သို့) ဘယ်အတွေးမဆို ဖော်ပြနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကို လက်ဆောင်အဖြစ် ရရှိထားပါတယ်။ သင့်ရဲ့ စကားပြောကောင်းတဲ့ဆုလာဘ်က လူမှုရေးတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုမှာ ၊ စင်မြင့်ထက်က ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတွေမှာ အကောင်းဆုံးပြသပါတယ်။ သင်ဟာ အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် ဗဟုသုတများစွာရှိတာကြောင့် ဘယ်ခေါင်းစဉ်ပဲလာလာ အဖြေရှိပါလိမ့်မယ်။
၂။ သူတို့က အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ team player တွေပါ
ရှဉ့်တစ်ကောင်ရဲ့ အာရုံစိုက်မှုနဲ့ အလွယ်တကူ အာရုံထွေပြားနိုင်သော်လည်း မေထုန်ဖွားတွေဟာ မီးစင်ကြည့်ကတတ်ကြပါတယ်။ သင်ဟာ အလုပ်မျိုးစုံလုပ်သူဖြစ်လို့ ဘယ်သူ့ကိုမဆို တာဝန်ပေးနိုင်ပြီး သူတို့အတွက် ရထိုက်တာကို သင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်သူမဆို သူတို့ လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေအတွက် သင့်အား မှီခိုအားထားနိုင်ပါတယ်။
၃။ ဒီရာသီခွင်လက္ခဏာမှာ ဘဝအတွက် တပ်မက်မှုတစ်ခုရှိပါတယ်
မေထုန်ဘဝရဲ့ လျှောက်လှမ်းမှုအားလုံးမှာ အလှတရားတွေကို ကြည့်ပါ။ လွင်တီးခေါင်မှာ ပန်းတွေ (ဒါမှမဟုတ်) လရောင်ကို မကြည့်ရသေးတဲ့ အခိုက်အတန့်ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအရာက မေထုန်ဖွားအား အတွင်း၊ အပြင်မှ လှပမှုကို ရောင်ခြည်ဖြာထွက်စေပါတယ်။
သဘာဝတရားနဲ့ လူတိုင်းအပေါ်ထားတဲ့ သင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာက ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကို သင့်ရဲ့အကူအညီနှင့်အတူ သင့်ကိုအားကျစေဖို့ လှုံဆော်ပေးပါတယ်။ သင်ဘဝမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက် ကြီးကြီး၊ ငယ်ငယ် အမြဲတမ်း တန်ဖိုးထားတတ်ပါတယ်။
၄။ သူတို့က ပုံပြောကောင်းသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်
နားတွေ၊ မျက်စိတွေအားလုံးက သင့်ပုံပြင်တွေရဲ့ အသံနှင့် အမြင်ဆီကို အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်၊ အတိတ်က အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ဖော်ပြတဲ့အခါ အရမ်းပျင်းစရာကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းဖြစ်သော်လည်း သင့်မှာ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလှတဲ့ စကားပြောခန်းတွေရှိပါတယ်၊ သင့်ပါးစပ်ထဲက အလွယ်တကူ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ စကားလုံးတွေမှသာလျှင် ပျော်ရွင်ဖွယ်စွန့်စားခန်းတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပါတယ်၊ ဒါက သင်စကားပြောတဲ့အခါ လူတွေကို ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၅။ မေထုန်ဖွားတွေဟာ အခြားသူတွေရဲ့အမြင်ကို အမြဲတမ်းသတိရပေးပါတယ်
သင့်စိတ်က အမြဲတမ်း ဟိုရောက်သည်ရောက်ဖြစ်ပေမယ့် အခြားသူတွေရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို လေးစားဖို့၊ နားထောင်ဖို့အတွက် သင့်မှာ ပွင့်လင်းသော စိတ်မူဝါဒရှိပါတယ်၊ သင့်ရဲ့အကြိုက်တွေ၊ မကြိုက်တာတွေမှာ confident ရှိသော်လည်း အမြင်မတူတဲ့သူတွေအတွက် လေးစားမှုလည်း ရှိပါတယ်။
အတိုက်အခံပါတီနဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတဲ့ ပွဲတွေမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သူတို့ရဲ့အတွေး/ခံစားချက်တွေအတွက် ဘယ်တော့မှ အထင်မသေးပါဘူး။ အဲဒီအစား တခြားလူပြောတဲ့အရာတွေကို နားလည်မှုနဲ့ အာရုံစိုက်မှု အပြည့်အဝပေးထားပါတယ်။